7 diyaaradood oo kuwa ugu wanaagsan oo kantarooli kara diyaaradaha ee 2018
Gadashada Guides Qalabka
Waxaad tahay lambarka kowaad ee kumbuyuutarka
Duulimaadyada dheeraadka ah ee diyaaradaha ka baxsan ee ka baxsan inta badan diyaaradaha oo ay fududahay in ay ku shaqeeyaan, oo lagu daray ciyaarida munaasabaddan kubbadda cagta ee kubbadda cagta ayaa ah hab aad u fiican markaad ka maqnayd galabta qorraxda ah iyada oo aan loo eegin da'daada aad tahay. Laakiin marka ay timaado iibsashada diyaarad kumbuyuutaro fog, waxaa jira waxyaabo ay tahay in la tixgeliyo, marka laga reebo miisaaniyadda. Miyaad dooneysaa qaabka ugu quruxda badan? Mid ka mid ah waqtiga hawada ugu dheer? Ama miyaad raadineysaa diyaarad wakhti qaadan karta oo biyo ku soo degan? Doorashada ugu fiican ayaa noqon karta mid dhib badan, laakiin nasiib wanaag, waxaanu qabanay shaqo-gurigaaga oo aad isugu taxluuqa liiska diyaaradaha ugu fiican ee fogaanta miisaaniyadda iyo heerka khibrad kasta, markaa waxaad xawaareynaysaa wadiiqada marnaba.
Inkastoo laga yaabo inay noqoto mid si caadi ah loo eego, HobbyZone Sport Cub S ayaa ka badan inta uu ka kooban yahay qaabka qaylo-dhaanta ee waxqabadka, xakamaynta iyo qiimaha. Diyaar u ah inaad ka baxdid sanduuqa, Sport Cub ma daryeeli haddii heerka khibraddaada uu yahay bilawga ama khabiir. Ku darista tiknoolajiyadda SAFE waxay kaa caawineysaa inaad kula dagaallanto xaaladaha dabaysha, dib u soo celinta xasiloonida hal keli keli ah oo aad ku barato xirfado aad u sareeya. Batroolka ku jira 150mAh wuxuu u suurageliyaa in ka badan 10 daqiiqo oo waqti duulaya hal go'an oo wuxuu u baahan yahay 60 daqiiqo oo dib u soo celin ah si uu dib ugu noqdo hawada. Si ka duwan qaababka qiimaha la midka ah ee la bilaabay, gacanta Sport Cub wuxuu ka qaadaa "wax jilbaha" oo kudhowaad 12 cagood dhererka maxaa yeelay kontaroolada afar-geesoodka ah waxay bixiyaan xargaha shaqada, duurjoogta, wiishashka iyo duuliyeyaasha. Xitaa kuwa bilawga ah, garaacista Sport Cub gawaarida, wareegga ama gadaal waa mid aad u fudud oo u ogolaanaya saacado madadaalo aan dhamaad lahayn.
Taageerada jaceylka sannado badan, HobbyZone Duet waa doorasho aad u wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya inay sii joogaan jaakadaha iyaga oo aan ku dhicin xakamaynta ama waxqabadka. Diyaargarow si aad u duuliso ka soo bixida, qiimaha bilawga ah ee ku haboon wuxuu hoos u dhigi doonaa qaar ka mid ah qalabyada laga helo noocyada qaaliga ah. Xaaladdan oo kale, la'aanta xakameyaha duurjoogta ama kuwa keli ah ayaa kaliya u oggolaanaya kontoroolka sadexda ah, laakiin si kastaba ha noqotee, taasi waxay ka dhigeysaa mid raqiis ah. Isku-dubbarididda kontoroolka saddexda-wado ayaa sidoo kale awood u leh in la helo dowlad dhamaystiran oo ku saabsan kor u qaadista, hagaajinta iyo riixitaanka midig kaddib marka Duet gacanta lagu soo rogo hawada.
Dufcadaha labajibbaaran waxay u rogi karaan xawaarooyin kala duwan si ay u kala saaraan si kala duwan si ay u caawiyaan iyaga oo si dhaqso leh oo siman u shaqeeya iyada oo dadaal yar oo ka yimid isticmaalaha. Baqshadda 150mAh ee Duet ayaa kugu haysa ilaa iyo sideed daqiiqo kahor inta aadan u baahnin "damiin."
Qalabka dayac-tirka kumbuyuutarka ee ugu caansan ayaa dhiirigeliya, halkaas ka fiiri Flyzone Seawind. Waxay bixisaa qiyaastii 57-inch wingspan waxayna awood u leedahay inay ka baxdo labada caws iyo biyo (iyo waxay u noqon kartaa labadaba si fudud). Qalabyada soo noqnoqonaya ee soo noqnoqonaya waxay sii kordhinayaan awoodaha amfibiinta iyo heerarka dhabta ah ee dhabta ah. Ku darida furfurnaanta fowdada iyo nalalka wareega waxay ku darsataa liiska horey u soo jiidashada sifooyinka waxayna gacan ka geysaneysaa horumarinta aerobatics iyo navigation oo aan u dhigmin Seawind ee tartanka la midka ah.
Dhismaha xajinta AeroCell ayaa 7,6 rodol oo miisaankeedu yahay 2100mAh waxay bixisaa 12 illaa 15 daqiiqadood oo duulimaad ah oo leh 60 daqiiqo dib udhig ah oo u dhexeeya duulimaadka.
Iyada oo kursi ciriiri ah oo la dhisay-parachute, carruurtu waxay isla markiiba ku dhici doonaan jacaylka Air Airs Ejector Jet. Isticmaalidda dibadda ee maskaxda loogu talagalay da'doodu sideed iyo ka weyn, waxay ku kacaysaa telefoon USB ah (waxay qaadataa 40 daqiiqo) waxayna bixisaa ku dhowaad shan daqiiqo oo duulimaad ah. Inkastoo aad ku jirtid hawada, maaraynta fudud ee Air Hog waxay u oggolaaneysaa diyaarada inay koraan, shil galaan ayna u noolaadaan si nabadgelyo leh, iyada oo ay ugu wacan tahay dhisidda xumbo joogta ah waxayna u saamaxday qaababka amniga ee diyaaraddaada ka dhigaya duulimaadyo badan inuu yimaado.
Xitaa haddii tijaabiye "shaqaaleeyuhu" ka shaqeeyaa, ma jirto wax yareynayo waqtiga duulimaadka, sidaa daraadeed duuliyuhu wuxuu si ammaan ah u degi karaa xitaa marka diyaaradu ay ku jirto hawada illaa uu batterigu dhamaado. Saacad gaar ah oo ah 2.4GHz ayaa u dhiganta ku dhawaad ​​100 fuudh oo ka fog maaraynta.
Kuwa bilowga ah ee raadinaya wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u bilaabaan, HobbyZone Champ waa xalka ugu fiican. Waxaa diyaar u ah inuu u duulo si sax ah sanduuqa (taas oo macnaheedu yahay in aan loo baahnayn shir), sidaas awgeed Champ waxay ku jiri kartaa hawada labadaba gudaha iyo dibedda (oo leh dabayl aan aad u badneyn) daqiiqado gudaheeda. Qaadashada waxay ubaahan tahay in yar oo 10 daqiiqo ah meel bannaan ah (inkastoo, ku dar meellaad dheeri ah oo aad u soo degto haddii aad si dhakhso ah u socoto) iyo batroolka 150mAh wuxuu u oggolaanayaa Champ inuu sii joogo hawada ilaa 20 daqiiqo, taas oo ku xiran waxqabadka iyo maneuvers .
Dhismaha xayawaanku waa mid sii socon kara, taas oo ah warka wanaagsan ee loogu talagalay bilawga, kuwaas oo laga yaabo in ay isku dayaan inay dhawr jeer ku burburaan suunka inta ay bartaan. Xakamaynta 2.4Ghz ee ku jirta ayaa meesha ka saareysa faragelinta calaamadaha banaanka ah (sidoo kale waxaa lagu darayaa kuwa cusub).
Ku fiican kuwa bilawga ah iyo hawlwadeennada khibradda leh, E-Flite Apprentice S 15e diyaaradaha u diyaargarowga ah waa doorasho taagan oo loogu talagalay iibsadayaashu aysan ka walaacsaneyn in ay wax yar ka badan. Iyadoo la rakibay 840Kv oo ah qalabka aan ciriiri lahayn, Xirfadlaha ayaa isku dhafan iyada oo si gooni ah u dhigma isku dheelitirnaan gaar ah oo korantada iyo aamusnaan leh. Sanduuqa gudaheeda, shirku waa inaysan qaadan wax ka badan 20 illaa 30 daqiiqadood xitaa dadka isticmaala oo aan khibrad lahayn. Iyada oo leh 59-inch-wingspan-wingspan, Tababarka wuxuu u baahan yahay beer ballaaran si loo xoojiyo suurtagalka ka dib koontada. Batterka 3200mAH ee soconaya 13 ilaa 15 daqiiqo, kuna xiran waxqabadka iyo aerobaticska.
Warqadda cusub ee tiknoolajiyadda, tiknoolijiyada SAFE waxay ka caawisaa bixinta difaac dheeraad ah ee diyaarada si dhakhso ah u dardar geliso haddii ay jiraan wax dhib ah (akhri: duufaan dabayl) kaas oo si dhakhso ah u garaaci kara 2.2-lound kooraska Dibadda.
Haddii aad raadineyso khibrada qalabka fog ee kontoroolka fogaanta leh taabasho gaar ah, Flyzone Calypso waxay dejisaa bararka sare. Fikradda loogu talagalay qof kasta oo ka bilaabanaya diyaaradaha kumbuyuutarka ee fog, naqshadaynta cirifka AeroCell ayaa u oggolaanaya in uu miisaankiisu dhan yahay 7.2 rodol (xitaa isagoo leh garbaha 73-inch). Si buuxda ayaa isugu soo ururay daqiiqado kaliya iyadoo la adeegsanayo Philips dabka iyo Calypso ayaa diyaar u ah inay ka soo baxdo (laga bilaabo gacantaada) waxayna si sahlan u soo degi kartaa labada caws iyo wadiiqooyinka ciriiriga ah. Laakiin ka hor inta aadan xitaa ka fikirin inaad degto, waxaad yeelan doontaa madadaalo hawada intaad ku jirto hawada, adigoo u mahadcelinaya qolyaha madax-banaan ee kumbuyuutarka ee kantarool kasta oo loogu talagalay xakameyn dheeraad ah iyo fursado karti leh oo ay ka mid yihiin duulimaad toos ah oo gaabis ah. Injirta 1300mAh waxay ku darsataa wakhti dheeraad ah hawada, in kasta oo dib u eegista user ay si adag uula talinayso in lagu ilaaliyo Calypso oo dabaysha loogu talagalay wakhti dheer oo duulimaad ah sida diyaaradu si aan kala go 'lahayn u wareegsan samada inta u dhexeysa siddeed ilaa toban mph.
8 Shanaadood ee ugu Fiican ee Soodhiga ah ee lagu iibsado 2018
IPad Air 2 iyo iPad Mini 3 GPS
DVD + R iyo DVD-R 101: sharaxaad loogu talagalay bilowga
IPhone-ga ugu wanaagsan iyo qalabka casriga ah ee Smartphone
8-ta ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo jeneraalayaasha la qaadan karo ee 2018
Akhri Buugaagta Maktabada ee E-Reader-ka
HD-yada Video-ga ah ee GPS
Ku dhajinta Cirbixinta ee Dukumentiga Ereyga
Sida loo bilaabo Podcast: 5 Su'aalaha Su'aalaha cusub ee Podcasters Weydii
Maxay Tahay Qoraalka Xidhiidhka?
Hagaha Diyaarinta iyo Soo Saarista Video si Vimeo
Aqoonsiga Webka Qarsoon
Dib u soo-celi Nidaamka daabacaadda ee Macinta si loo xalliyo Dhibaatooyinka X. OS X
Abuur Abaabul Heer Sheeg ah ee PowerPoint 2003
Sidee loo soo dhejiyaa qoraalada iyo macluumaadka kale ee Browsing ee Firefoxka
Teslagrad - Wii U Review Review
Barnaamijka CD-ga ee Bilaashka ah ee CD / DVD
Doorashada Antenna Dibedda leh Antenna Web
8 Soodhadh ee ugu fiican ee lagu iibsado sannadka 2018 ee kamaradaha DSLR
Isdhexgalka PSP / PS3
IPhoto Tips iyo Tricks - Tababarka iyo Guud
Sida Loo iibsado iPad-kaaga iyo Qaadashada Qiimaha ugu Fiican
Maxay tahay fariin ku socota shabakada kombiyuutarka?
Tusaale Isticmaal Taliska Guud ee Linux